Gaaffii Oromoo fi Deebii inni barbaadu – Gubirmans Publishing
Posted on May 1, 2018 by bgutema
Diinni Oromoo Oromoo saaduu eegalee jira. Akaakuu Oromoon qaban utuu hin tahin kan inni akka qabaatan fedhu kennaafii. Sun akkuma yeroo aangoo irratt qabuu, fedha eenyumaa saanii haaluu irra madda. Kanaaf, ulaagaa inni lafa kaa’eefii addatt, gaaffii kan kaasan dhiphoo, fotoqsituu yk shoroorkeessitu irra buusa jedhaman faatu kennamaa fi. TPLF/EPRDF, ABOn shororkeessaa jedhee labse. Ergasii, Oromoo jibbu hunda ABO dha jedhe hidhaa, guraaraa fi ajjechaan itt roorrisaa jira. Kanaaf, manneen hidhaa afaan Oromoo dubbatu jedhee qondaalichi Tigree raga bahe. Kan isa maalalchiise garuu dadhabina imaammata isan ofiitt jijjiiruu ture. Diinni Oromoo hundi mallattoon saa ABO balaaleffachuu dha. ABOn tokkummaa saa akka hin eeganne karaa dandahan hunda kan itt bobahaniif kanaafii. Doo’ii Way
yaaneen maqaa Oromoo xureessuuf Arbaguugguu fi Baddannooti waggoota digdamii shan dura tolchite utuu namootumti Amaara tahan ragaa bahani hardhayyuu akka waan ABOn tolcheett kan xeeban jiru. Oromoon waan ofii tolche itt amanee tolcha; ittiin dhaadata malee haaluun safuu dha. Dadhabooti ABO keessa jiran, shiira diinaa kana naamusaan jala dhaabbachuu dadhabanii yoo jala kufan mullatu. ABOn jaarmaa akeeka jaalbiyyaa fi goototaatin dhaabbate. Dabballoota daddaaqoo Kaayyoo irraa cehan, madaalamu hin qabu. Isaan sababfatanii akeeka ABO jallisuuf abbaltiin yk wallaalinaan kan bobbahan hedduu dha. ABOn dhugaa, warraaqaa dha. Fedha Oromoo bakkaan gahuuf duubatt hin jedhu. Walabummaan Oromiyaa, tokkummaan Afrikaa fi nagaa fi araarri addunyaa yoomuu akeeka saati. Oromiyaan haa jiraattu! Bilisummaan haa lalisttuu!